Fadeexad Kufsi Oo Dul Hoganaysa Masuuliyiinta Wasaarada Daakhiligi Somaliland Iyo Halka Ay Ku Dambaysay Sheekada Inan Faraxumayn Loo Gaystay | Baligubadlemedia.com
Fadeexad Kufsi Oo Dul Hoganaysa Masuuliyiinta Wasaarada Daakhiligi Somaliland Iyo Halka Ay Ku Dambaysay Sheekada Inan Faraxumayn Loo Gaystay
Masuuliyiinta wasaarada arimaha gudaha somaliland ayaa dhex fadhiya kiiskii ugu foosha xumaa oo la xidhiidha inan ka mid ah hawl wadeenada wasaarada arimaha gudaha oo masuul sare oo wasaarada ka tirsani faraxumayn baahsan u gaystay.
Inantan oo tacadiga loo gaystay ku soo bandhigtay qormooyin taxane ah oo qoraaga Ismaaciil Cabdi Ubax ku soo bandhigo tacadiyada goobaha waxbarashada iyo shaqada loogu gaysto hablaha ayaa masuuliyiinta wasaarada arimaha guduhu ay si adag u dhibsadeen ka dib markii ay soo shaac baxday fadeexada dul hoganaysa.
Hadaba qoraa Ismaaciil Cabdi Ubax oo masuuliyiinta wasaarada arimaha guduhu ugu hanjabeen dacwad ay ka gudbiyeen ayaa soo bandhigay halka uu ku dambeeyey qorshe ay masuuliyiinta wasaaradaasi ku dambabaseen inantii uu tacadiga foosha xun u gaystay masuulka xilka ka haya wasaarada daakhiligu.
Qoraa Ismaaciil Cabdi Ubax ayaa warbixin uu soo bandhigay ay u dhignayd sidan:-
Sheekada inanta dhibbanaha ah ee sheekada 3-aad ee taxanaha QayladhaanDumar waxa aan halkan idin kula wadaagay hebeenkii Jimcuhu soo gelayay. Waxana ay ka mid ahayd sheekooyin taxane ah oo ay ii soo direen dumar ay tacaddiyo kala duwan ka soo gaadheen goobaha shaqada ama waxbarashada.
Sheekadani sidaas ayay dhankayga kaga xidhan tahay, dhibbanahana kaga xidhan tahay, waxaana i noo sii socon doona taxaneheennii iyo sheekooyinka dambe.